बधाई छ नेपाली टीम! नेपाल फुटवल खेलको फाइनलमा पुगे – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > बधाई छ नेपाली टीम! नेपाल फुटवल खेलको फाइनलमा पुगे
बधाई छ नेपाली टीम! नेपाल फुटवल खेलको फाइनलमा पुगे
admin October 13, 2021 Uncategorized, खेलकुद 0
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
अत्यन्त प्रतिष्पर्धात्मक खेलमा बुधबार मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा बंगलादेशसँग नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल खेलेको थियो । उक्त खेलमा १-१ को बराबरी गर्दै नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएको हो ।
खेलको दोस्रो मिनेटमा नै बंगलादेशका टोपु बर्मनले नवयुग श्रेष्ठलाई पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिर लडाएपछि नेपालले फ्रिकिकको अवसर पाएको थियो । उक्त फ्रिकिकमा सुजल श्रेष्ठले पोस्टतर्फ प्र हा र गर्न सकेनन् । लगत्तै दुवै टोलीले बलियो प्रस्तुति गरेपनि खेल बराबरीमा सकिएको थियो ।
युवतीको अर्ध न ग्न नाच गराए जनप्रतिनिधिलाई समेत यस्तो!
बौद्ध गुम्बाका भिक्षुको लिक भएको ३०० जिबी भिडियोले संसार हल्लियो, गे सेक्स देखि रक्सी-मासु खाइरहेका दृष्य !